Ogaden News Agency (ONA) – Xarunta Dhexe ee JWXO : Xaaladda Dhabta ah ee Itobiya ka Jirta iyo Kala Qaybsanaanta TPLF
Wararka nagasoo gaadhaya caasimada gumaysiga Itoobiya ee Adis ababa ayaa sheegaya in ay halkaas ka bilowdeen qurqulatooyin siyaasadeed oo lasoo daristay guud ahaan wadanka ay xukuumada wayaanuhu maamusho gaar ahaan qabiilka tirada yar ee Tigreega. Sida aan lawada socono lagasoo bilaabo bakhtigii Kaligii Taliye Males Zanawi wuxuu wadanku galay xaalad kala amar qaadasho la’aan iyo kala qaybsanaan siyaasadeed oo baahsan wuxuuna wadanku yeeshay maamul maqaarsaar ah oo ka muuqda xafiisyadii wadanka looga talin jiray iyo maamulka Dhabta ah oo ah janaralo ka dhashay qabiilkii uu KT Zinawi ka bakhtiyay.
Dhanka kale waxaa soo xoogaystay kacdoonka ay shacabku samaynayaan gaar ahaan qoomiyadaha Oromada iyo Xabashida (axmaarada), waxaana caasimada gumaysiga gilgilay mudaharaadyo aan ka joogsi lahayn oo ay samaynayeen shacabka Oromada. Sidoo kale waxaa sare ukacay gabood falka ay xukuumadu ugaysanayso shacabka Oromada khaasatan ardayda
dhigata Jaamacadaha iyo iskuulada sare. Sidoo kale waxaa xoogaystay guuxa siyaasadeed ee qoomiyada Axmaarada waxaana soo badanayay dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ay wadaan siyaasiyiin u dhalatay qoomiyada horay wadanka u maamuli jirtay ee Axmaarada oo uusan ka dhamaanin damacoodii ay ka lahaayeen xukunka wadanka, waxaana mudo dheer soo jiray dadaal balaadhan oo lagu kala ilaalinayo qaybaha muhiimka ah ee wadanka laga maamulo iyo qoomiyada Axmaarada.
Sikastaba ha ahaatee waxaa jira walaac aad uwayn oo soofood saaray qoomiyada wadanka sida dadban iyo sida tooska ahba umaamusha ee Tigree wuxuuna walaacan yimid kadib markay soo dhawaatay doorasha kusheegtii wadanka oo lafilayo in ay dhacdo sanadka fooda inagusoo haya ee 2015. Waxaana qoomiyada Tigree ga umuuqda in uusan gacantooda kusoo laaban doonin xukunku mar hadii ay siyaasadii qoomiyadu noqotay mid agoon ah oo uu ka bakhtiyay ninkii ay ku tiirsanaayeen. Walaacan oo ah mid saameeyay shakhsi kasta oo qoomiyadaa u dhashay ayaa keenay inay qoomiyadu kala qaybsanto una qaybsanto 2 labo qaybood. Qaybsanaantan oo mudo soo jirtay ayaa dhawaanahan cirka isku shareertay kadib markay soo guda gashay doorasha ku sheegtii ay doonayeen in ay mar kale xukunka ku hantaan si ay qoomiyada tirada yar ee Tigree u sii gumaysato qoomiyadaha kale ee hoosjooga xukunka Itoobiya.
Waxay qaybsanaanta qoomiyadu gaadhay heer aysan iskusoo laaban karin waxayna Todobaadkan horaantiisii shirar iska soo horjeeda kukala qabsadeen Adis ababa iyo Maqale. Labadan shir oo isku maalin dhacay ayaa lagaga hadlayay mustaqbalka Qoomiyada oo ay qolaba si u aragto. Qolada Adis-ababa kushirtay ayaa aaminsan in ay doorashada wadanka
qoomiyadu udiyaar garoowdo si ay xukunka ugusoo laabtaan waxayna sheegayaan in ay jiraan fursado yar oo lagu hanankaro xukunka wadanka ayna doonayaan in ay u midoobaan sidii ay xukunka xooga ah kuhanan lahaayeen waxayna shacabka Tigree ugu qaylo dhalaaminayaan in ay geed dheer iyo geed gaabanba u fuulaan sidii ay markale u arki lahaayeen qoomiyada oo maamusha wadankan ay kunoolyihiin dadka uruuriska ah.
Dhanka kale qaybta Maqale ku shirtay oo ay kujiraan siyaasiyiin miisaan kuleh qoomiyada Dhaxdeeda ayaa ku doodaya in ay dhamaatay xiligii ay qoomiyadu ku riyoon lahayd xukunkan oo gacanta usoo gala waxayna sheegayaan in ay hurdada katooseen qoomiyado katiro iyo tayo badan oo qaarkood horaan wadanka usoo maamuli jireen. Dhanka kale waxay ku doodayaan in uu isbadal ku yimid fahankii siyaasada ee qoomiyadaha iyo dhiiranaanta ay samaynayaan shacabka iyo siyaasiyiintuba.
Sidoo kale groupkan ayaa ku doodaya in uu wadanku kala socdo qoomiyad kastana ay kafakarayso sidii ay u goosan lahayd inteeda waxaa kale oo ay walaac ka muujinayaan in uu xukunku kuwareego qoomiyada Axmaarada, oo laxasuuqi doono qoomiyada tirada yar ee Tigree. Sidaas darteed waxay leeyihiin waxaa muuqata fursad aan kugoosan karo inta aan wadanka ku leenahay taas ayaana ah sida kaliya ee aan dadka ree Tigree ku badbaadin karo waxayna ka dayrinayaan in ay isudiyaariyaan doorasho wadankaas kadhacdo oo ay guuli karaaci karto.
Sikastaba ha ahaatee waxaa muuqata qalalaaso siyaasadeed oo guud ahaan qobtolka Itoobiya soo foodsaartay gaar ahaan qoomiyada xukunka wadanka cidlada ka qaadatay ee Tigreega lamana garan karo waxay ay ku dambayn doonto xaaladu.
Xarunta Dhexe ee JWXO.